ການຄາດຄະເນຈາກ Semalt: ອະນາຄົດຂອງການກໍ່ສ້າງໃນ SEO
Ny fanorenana ny rohy dia mbola iray amin'ireo singa tena ilainaamin'ny fomba fiasa SEO. Ny rohy dia mamaritra domains amin'ny sehatry ny laharan'ny pejy mba hanamarina ny fahamendrehan'ny tranonkala iray. Famoronana rohy ankehitrinyNy teknika dia manasongadina ny famoronana votoaty izay manisy rohy mifototra amin'ny tombotsoany - bay area computer man san jose.
Mila mahafantatra isika hoe nahoana isika no mampiasa votoaty hananganana rohy.Manam-pahefana eo an-toerana sy PageRank mifantoka amin'ny isan'ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao ary Google dia manamarina ny dikany sy ny kalitaonyamin'ny rohy. Ny fampiasana rohy ho toy ny fanamarihana dia mihevitra fa sarobidy izy io ary ampiharina ho mendrika.
Ryan Johnson, Lehiben'ny Sales Manager Semalt Sampan-draharaha nomerika, manambara mazava ny antony hanoratana ny votoaty lehibe amin'ny tombontsoa fanampiny sy ny fametrahana rohy tsara kokoa.
Ny loza ateraky ny fanorenana tsy misy Content
1. Mitondra mpitsikilo
Google dia mijery ireo izay mamoaka votoaty tsy misyfanohanana ny fampitandremana ary mitaona ny fampitandremana izay mety hitondra ny sazy miharo lahatra.
2. Famoahana fanontana.
Misy fangatahana avo kokoa ny rohy manankarena amin'ny votoaty hanovana syNy famoahana ny fahefana ambony noho ny famoahana ny haino aman-jery ho fampahalalana lehibe.
3. Ny fahafahan'ny teny fanalahidy.
Mijanona ho singa ilaina amin'ny fanorenana rohy ireo tenifototra.Mety ho very ny fanentanana ho an'ny teny fanalahidy iray manokana raha tsy misy ny votoaty ao amin'ny rohy.
Misy ny fandrosoana mety, toy ny laza tsaratsara, izanyTonga amin'ny famoahana rohy amin'ny votoaty izay mety ho very sy ho voafafa raha toa ka misy rohy iray tsy misy fampahalalana.
5. Ny vokatr'ireo manam-pahefana.
Ny fahefana dia azo atrehina raha mandefa rohy tsy misyna afa-po izy ireo na tsia.
6. Toe-javatra tsy voafetra.
Tsy mahazo vintana ianao handikana rohy ary handraisanaNy fifamoivoizana ankafizin'ny ankamantatra dia ny famoahana rohy tsy misy.
Misy fepetra mibaribary izay mety hahazoana rohy tsy misy votoatiny
1. Famaranana ravina rava
Misy teknika mampiasa fitaovana rindrankajy izay tsy mitombinaFeno rohy tapaka, izay heverina ho ratsy ho an'ny SEO, avy eo mandefa azy ireo amin'ny webmaster ho an'ny mpanamboatra. Ho an'ny rohy rehetra ravadia omena tombony ho an'io rohy io ianao satria izy io dia ao anatin'ny votoatiny.
2. Ny valin-kevitra sy forums.
Mba hivezivezy rohy mankany amin'ny tranonkala amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra sy ny forums, diadia mila manana votoaty lehibe satria nanjary nasiaka be ny manam-pahaizana momba ny sehatra.
3. Nofollow rohy.
Izany dia manome fomba mora hametrahana ny rohy miaraka amin'ny antoka tsy misyGoogle ny sazy satria tsy mandalo amin'ny manampahefana izy ireo. Amin'izany fomba izany, dia mandray soa avy amin'ny fifamoivoizana azo avy amin'ny rohy ianao.
4. Ny mpamatsy, lisitry ny mpiara-miasa.
Miara-miasa amin'ny fikambanana iray na manome vola ho an'ny tranonkalaAfaka mahazo vola eo amin'ny pejy voalohany ianao.
5. Lohatenin'ny loharano.
Manampy anao hahazo rohy avo lenta ny fanohanana fikambanana iray ety anaty aterineto.
Nahasarika sary malaza ny olona, ​​ary hiantefa foanaho an'ny loharanon-tserasera tamin'ny fampiasana azy io.
Farany dia azo atao ny manangana rohy tsy misy votoatiny ary afaka mahazo izanyny sanda feno amin'ny fahefana nomena azy. Na dia mety hahazo tombony aza izany, toy ny fampihenana ny fampiasana fotoana,Ny fanorenana rohy mifototra amin'ny atiny no safidy tsara indrindra sy azo antoka. Ny votoatiny no fototry ny SEO.